Irezumi, niavian'ny tatoazy any Japon | Ny fanaovana tatoazy
Lazao fa ny irezumi dia ireo tatoazy japoney ny nentim-paharazana dia somary miverimberina. Ny teny tenany dia midika hoe 'tatoazy', satria ny ire dia midika hoe 'mampiditra' ary ny zumi dia midika hoe ranomainty.
Na izany aza, ilay teny irezumi dia nampiasaina nandritra ny fotoana ela mba hanondroana ny tatoazy nentim-paharazana japoney. Ho hitantsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny niandohany.
1 Ny niandohan'ny irezumi
2 Zavakanto miovaova
Ny niandohan'ny irezumi
Ny fiavian'ny tatoazy any Japon dia tsy dia mazava loatra, na dia misy aza ireo manam-pahaizana izay mieritreritra fa afaka miverina amin'ny 10.000 talohan'i Kristy., satria ny marika dia hita eo amin'ny vatan'io fotoana io izay mety mifanaraka amin'ny tatoazy, na dia tsy teôria eken'ny rehetra izao aza izy io.
Mila miverina amin'ny 600 talohan'i JK ianao mba hahitana santionany amin'ny tombokavatsa Japoney azo antoka na tsia. Toa nahatsikaritra azy ireo ny mpitsidika sasany avy any Sina nandritra ny diany.
Toa ny taloha dia nampiasaina ny tatoazy ho antony ara-panahy sy hanamarihana ny toerana misy anao. Saingy, raha ny marina, na dia misy aza ny manonona sy vavolon'ny irezumi tamin'izany fotoana izany, fantatra ihany koa amin'ny vanim-potoana Yayoi, dia tsy misy atao ambanin-javatra.
Boky roa mitantara ny tantaran'ny fotoana, ny Kojiki ary ny Nihon shokiRaha ny marina dia nasongadin'izy ireo fa tsy nisy ny tatoazy any Japon, ary ireo nitafy azy ireo dia vahiny (ankoatry ny Ainu, izay niresahanay vao haingana).
Etsy ankilany, ity fotoana tsy fandriam-pahalemana ity dia manokatra vanim-potoana marobe izay ny tatoazy ihany no ampiasaina hanamarihana ireo mpanao heloka bevava, ka amin'izany dia misy dikany ratsy. Tsy amin'ny vanim-potoana Edo (1600-1868), izay ahatongavan'ny irezumi amin'ny famirapiratany tanteraka, no manomboka miova ny raharaha.
Manantena izahay fa tianao ity lahatsoratra ity momba ny niandohan'ny irezumi. Angamba andro hafa hiresaka momba ny vanim-potoana Edo isika ary hanohy ny tantara mahaliana amin'ity zavakanto ity. Lazao anay fa tianao ve izany? Manana tatoazy fanao Japoney ve ianao? Aza hadino fa afaka milaza aminay izay tadiavinao ianao, noho izany, mila mamela hevitra fotsiny izahay!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tattoo atsinanana » Irezumi, niavian'ny tatoazy any Japon
Tatoazy geometrika tsotra, fanangonana endrika